Inan yar oo 13 jir oo u dhashay dalka Kenya ayaa ikhtiraacay laydh ka cabsiinaya Libaaxa (akhriso maqaalkan xiisaha leh) | Somaliland Hargeisa City
Inan yar oo 13 jir oo u dhashay dalka Kenya ayaa ikhtiraacay laydh ka cabsiinaya Libaaxa (akhriso maqaalkan xiisaha leh)
27 February, 2013 — somaliland1991
Richard Turere, 13 jir ah , waa wiil yar oo u dhashay dalka Kenya, waxaanu ka dhashay reer xoolo dhaqato ah oo caasimadda Kenya ee Nairobi duleedkeeda deggen, Nairobi´s nationalpark. Waxa uu bilaabay in xoolaha lo´da ee reerkoodu lahaayeen in uu raaco, marku ahaa 9 jir. Waxaa haddaba goobtaa ay degenaayeen reerkoodaa u dhawaa national park, oo xayawaanka dibad-galeenku ku nool yihiin, khaasatan libaaxa. Richard Turere, oo yidhi waxa aan aad u necebahay libaaxa, sababtoo ay tahay, waxa uu dhameeyey oo uu cunay xooalahaygii. Isagii hadalkiisii siiw ata ayaa waxa uu yidhi”””” markii aan arkay in libaaxyadii dhmeeyeen xoolihii aanu lahayn ayaan ku fikaray in aan xal keeno, si anay mar danbe aanay xoolaha nooga cunin dadkana aanay wax u yeelin””
Da´da uu ku ikktiraacay fikradan cajiibka, waxa ay ahayd isagoo jira 11 sanno.
Fikradii aan ikhtiraacay waxa ay ahayd, oo aan ogaaday, in Libaaxu ka baqo waxa dhaqdhaqaaya ee laydhka leh: Waxa aan sameeyey in aan tijaabiyo firadaas, maalin maalmha ka mid ah ayaan soo qaatay tooj, anigoo la dhaqdhaqaaqaya toojkii, ayey libaaxii soo dhaafi waayey meeshii ay joogeen.
Waxaa markaa ii soo baxday in ay ka baqdaan laydh dhaqdhaqaaqaya.
Fikradii waan sii horemariyey oo waxaan soo qaatay, waayiro (xadh ka laydhka) waxaan ku xidhay baytaruga baabuurta,
batarigana oo ku shaqeeya cadceeda (a solar panel.l) ayan ku talaalay, ka dibna waxa aan geliyey oo ku xidhay xadhigii waayirka ahaa laydh big biglaynaya. Libaaxyadii markii ay arkeen goobtii oo lagu xidhay laydhadh big-biglayna way baqdeen oo uma ay soo dhawaan karayn, markii ay arkeen laydh big-biglayna xeradii xooluhu ku jireen iyo hoygii reerku ku noolaayeen.
runtii waa fikrad cajiiba. Waxaana arrintan aad ula dhacay dad badan oo libaaxu dhibaato weyn ku hayey nolosha dadka iyo xoolahaba. Waxaanay faaído weyn oo waxtar leh u soo kordhisay dadyawga xoolo dhaqatada ah ee had iyo jeer dhibaato dhaawac iyo dhimasho kala kulmi jiray libaaxyada dalkaas Kenya ku nool.
Richard Turere, oo ay immika da´diisu tahay 13 jir, ayaa laga soo kaxeeyey meeshii uu xoolaha ku raaci jiray, waxaana qaadtay iskuulka ugu heerka sarreeya xaga waxbarashada dalka Kenya, ee la yidhaahdo, Brookhouse International School. Waxanu doonayaa mustqabalka in uu noqdo injineera xaga diyaaradaha. Wiigan ayaa lagu soo casuumay in uu ka qayb galo shirka ay iskugu yimaadaan dadka dunnida wax ku soo kordhiya xaga ikhtiraaca, (invention) TED confr
Iskuulka ugu wanaagsan xga waxbarashada dalka Kenya, Brookhouse International School
Richard Torere, 13 jir, doonaya mustaqbalka in uu noqdpo ingineer xaga diyaaradaha
Waxa aad iyo aad loola yaabay isaga oo da´daa jira oo haddana aanu wax aqoonna haba yaraatee u lahayn isku xidhka waayirada xaga laydhka.
Waayadii hore ee libaaxu ku noolaa Somaliland, waxa la odhan jiray libaaxu dabka ayuu ka baqdaa.
Arrintan ma la odhan karaa waxa ay daba socodtaa sidii berigii hore loola dhaqmi jiray libaaxyada ku nool dalka Somaliland.
Waxaa jiri jirtay in reer miyiga Somaliland ku noolaa wakhtiyadii hore , ay samayn jireen habeenkii marka uu gabalku dhaco in reerka dibadiisa dab laga shidi jiray oo lagu weegaari jiray, si aannu libaaxu reerka ugu soo dhicin habeenkii. Waxa cad in libaaxu iyo dabka ay col yihiin. Libaaxu waxa uu ka baqdaa dabka. Marka xaabada la shido waakan dabka ay ka duulaan dhimbiilo jac jacda haya oo duul duulaya.
Fikardan uu keenay, Richard Turere, waa mid wanaagsan oo waayahan immika la joogo la jaan qaadaysa. Laakiin fikradda asalkeedu waxa ay ku arooraysaa uun in libaaxu ka baqo dabka, waayo dabku markuu baxayo iftiin buuu keenaa. koncebtigu waa isku mid, xaabo dab ka baxayo, iftiin iyo dhimbiil duul duulaysa.
hambalyo weyn ayaan u dirayaa Richard Turere.
© Cabdiraxmaan Sacad Siciid
Halkan ka daawo Video Richard Turere.
« Shirkadda Da´uus oo xarun ka furanaysa caasimadda Somaliland ee Hargeysa
Daawo video Somaliland Today »